Matanho mapfumbamwe ekuti uwane zvakanyanya kubva kune yako iPad | IPhone nhau
Matanho mapfumbamwe ekuti uwane zvakanakisa kubva kune yako iPad
Iyo iPad chigadzirwa icho, nekuda kwekushandisa kwayo, kazhinji chine huwandu hwakawanda hwehunhu hwatisingazive, uye zvimwe izvozvi nekuuya kwePadOS inosanganisira mashoma eanoshanda ayo anounza kunyangwe padhuze ne macOS uye iite iyo inobereka zvakanyanya chinhu. Nekudaro, sekune chero chikuva, kana isu tisingazive nzira dzese idzo dzinosanganisira, hatizombokwanisa kunyatso shandisa kugona kwayo. Zvatinokuunzira nhasi zvakateedzana zvematanho izvo zvinokutendera iwe kuti uwane zvakanakisa kubva kune yako iPad uye uwane zvese zvaungaite nekukurumidza.
1 Sarudza uye fambisa akawanda mafaera panguva imwe chete
2 Wona maapplication maviri pane split screen
3 Kusarudza zvinyorwa paPad
4 Slide Pamusoro - Inoyerera App pane iPad
5 Goverana iCloud Drive maforodha
6 IPad keyboard tricks
7 Kurumidza scroll bar
8 Zviratidzo zvekunyora nyore nyore uye kunama
9 Rongedza chidzitiro chekumba
Sarudza uye fambisa akawanda mafaera panguva imwe chete
Iine iPadOS pakati pezvimwe zvinhu isu tinokwanisa kusarudza mafaera uye toadhonza pakati pezvishandiso nenzvimbo zviri nyore, Ichi chaive chinhu icho vazhinji vane ruzivo vashandisi vePadad vaida uye Apple yakabvuma kuiwedzera mukuda kwavo kuita iyo iPad chinhu chinobudirira. Sezvatakataura, unogona kusarudza tsama yakanaka yemafaira panguva imwe chete wozvidhonza zvakananga kunzvimbo yavo nyowani pasina matambudziko.
Iwe unofanirwa kusarudza aya mafaera uchishandisa bhatani riri kumusoro kurudyi kwescreen, uye iwe unoita wokudhinda wakawedzerwa kufambisa iyo faira sekunge uri kufambisa chero application, ichafambisa zvese kamwechete kunzvimbo yayo nyowani.
Wona maapplication maviri pane split screen
Multitasking ndiyo mukana mukuru weiyo iPadOS pamusoro peIOS, yeichi tinogona kusarudza maviri mafomu ekuvhura iwo panguva imwechete uye gadzirisa iyo skrini muzvikamu zvitatu, kukwanisa kuenzana zvakaenzana saizi yatinopa kune yega yega application.
Kune izvi isu tinongofanirwa kuvhura application, kukumbira iyo Dock yepazasi uye sarudza chishandiso chatinoda kuvhura muSplit View nekutsikirira kwenguva refu nekuchitsveta kuruboshwe kana kurudyi kwescreen. Ichakamurwa kuita mahafu maviri uye ichatibvumidza kuti tikurumidze kugadzirisa saizi yechikamu chega chega chakapihwa.
Kusarudza zvinyorwa paPad
Imwe yemabhenefiti e3D Kubata kana Haptic Kubata ndeyekuti ivo vanotibvumidza kusarudza zvinyorwa nyore, tinogona kufamba pakati petsamba nemazwi kutsiva, kudzima kana kugadzirisa zvinyorwa nekukurumidza uye nyore, Icho chinoshanda pane iyo iPad?
Hongu, tinogona kusarudza zvinyorwa chaizvo paIpad, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kungodzvanya nezvigunwe zviviri pane iyo keyboard keyboard uye ichatibvumidza kufamba sezvatinoita pa iPhone nekukurumidza uye nyore, izvi pasina mubvunzo zvichaita kuti tiwedzere kubudirira patinonyora.
Slide Pamusoro - Inoyerera App pane iPad
Kana isu tisingade kupatsanura sikirini pakati pezvikumbiro zvinoverengeka neiyo Split View nekuti isu tinongoda kushandisa kunyorera kwemasekondi mashoma uye kuibvisa nekukurumidza Apple zvakare ine mhinduro kwatiri paPOSOS.
Slide Pamusoro inotibvumidza kuvhura chero inoenderana application pane inoyerera skrini uye itai kuti inyatso shanda pasina kurasikirwa nezviri kumashure kwedu, semuenzaniso tinogona kuvhura iyo App Store munzira diki yekudhawunirodha App apo isu tichigadzirisa zvinyorwa uye tobva tavhara, nekuti izvi tinokumbira iyo Dock, sarudza chishandiso chatinoda uye chisiye chero kupi kwechiso pane kuchikanda kune kumucheto kwechiso. Slide Pamusoro inowirirana zvizere neSplit View, kuti tikwanise kusvika kumatatu ekushandisa panguva imwe chete.
Goverana iCloud Drive maforodha
Cloud chengetedzo apuro Inoshandiswa zvakanyanya nevazhinji vashandisi vayo uye isu tese tine 5GB yemahara. Kunyanya kuburitsa iri dhairekisheni rekugovana mashandiro, ayo nechimwe chikonzero akaiswa muIOS zvakanyanya.
Kugovera iCloud folda isu tinongo enda kuFiles application, sarudza iyo, tinya mamiriro ezvinyorwa zve mugove uye ichave inobatana, ichivandudza shanduko dzese nekukurumidza.
Kunyora pane iyo iPad keyboard dzimwe nguva kunetsekana, kunyanya yakatwasuka uye izvozvi zvatine saizi yakaenzana ye10,2 inches. Kunyange zvakadaro, Wakatadza kana iwe uchifunga kuti iPadOS inongova nekwaniso yekhibhodi. Kana iwe ukabaya pane bhatani rine kiyibhodhi icon pazasi kurudyi, unogona kusarudza idzi sarudzo:
Split keyboard: Maviri madiki madiki ekhibhodi rimwe kune rumwe rutivi rwechidzitiro chekunyora nacho neruoko rumwe.
Kuyangarara: Khibhodi kadiki inoyerera saizi yeiyo iPhone inotibvumidza kuti tinyore tichishandisa iyo «swype» basa pasina kudzvanya makiyi.
Kurumidza scroll bar
Wakaneta kupururudza pane peji rewebhu? Kunyangwe kana izvo zvauri kutsvaga kuri kukurumidza kuwana peji 233 yePDF iPadOS ine mhinduro kwauri, uye izvo ndezvekuti kunyangwe vazhinji vasingazvizive, isu tine imwe inowanikwa inokurumidza scroll bar.
Paunopururudza iwe unoona diki diki kurudyi kwechidzitiro, Zvakanaka, kana iwe ukaisiya ichimanikidzwa, unogona kukurumidza kudzika kana kukwira nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvaungaita nemupumburu wenguva dzose pachiratidziri, iwe unofungei?
Zviratidzo zvekunyora nyore nyore uye kunama
Rimwe zano raungave usiri kuziva nderekuti iwe unogona kukurumidza kuteedzera, kunama uye kucheka mukati mekushandisa kwe faira manejimendi nemaoko mashoma akareruka kuti tinokusiya iwe unotevera:
Kopa: Pinza neminwe mitatu pane faira
Namatidza: Zoom neminwe mitatu pane imwe nzvimbo
Cheka: Ita iyo yambotaurwa kopi chiratidzo kaviri mumutsara
Hapasisina kushandisa mapfupi akaratidzirwa pabhodhi, izvi zvinonyanya kubatsira kana uine zvigunwe zvidiki kuitira kana ukasashandisa 12,9-inch iPad Pro.
Rongedza chidzitiro chekumba
iPad OS inotarisa zvakanyanya uye zvakanyanya kunge macOS uye nekuda kwechikonzero ichocho isu zvakare tine mukana wekugadzirisa zvimwe zvinhu muChitubu. Kune izvi zvinongofanirwa kuti mune yakatwasuka fomati isu tinotsvedza kubva kuruboshwe uchienda kurudyi.
Mune menyu ye edit Widgets Izvo zvichatibvumidza isu kumisikidza izvi paimba screen yeiyo iPad uye izvi zvichatibvumidza isu kuwana ruzivo rwako nguva dzese uye nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Matanho mapfumbamwe ekuti uwane zvakanakisa kubva kune yako iPad
Bhaisikopo rinotevera raMartin Scorsese rinogona kugadzirwa naApple
Apple TV + inoisa chikamu chakakura chekatalog yayo yakavhurwa kwenguva yehosha